Uncategorized Archives ~ MTJaarraa's Space
Seenaa qabsoo Oromoo of duuba deebinee yoo ilaalle haalli keessa dabree nu dhaqabe wal arrabsuu fi wal tuffachuu akka hin taane beeku qabna. Wal tuffachuu fi wal irratti duulun ofumaan of gabroomsuudha. Namni dhugaa akkana ibsee fi tokkumma ummata keennaatif dhaabbate guyyaa tokko akka hin bulle arginee jirra. osoo beeknu maalif daganna? Hanga Yoomitti Wal […]
Yaa Rabbii nama ilma namaatif bu’a buusu nu taasisi. Hamaa fi hamtuu nurraa qabi. Lafa Garaan keenna yaaden nu gahi. Qananii ganda lamaanitu nuuf kenni!